पर्सा र बारामा तीन काेरोना संक्रमितको मृत्यु – Health Post Nepal
पर्सा र बारामा तीन काेरोना संक्रमितको मृत्यु
२०७७ भदौ ११ गते १२:३८
पर्सा र बारामा थप ३ जनाकाे काेराेना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु भएकाे छ। बाराकाे एक गर्भवती महिलासहित पर्साका दुई जना पुरूष कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको हाे।
बाराको हर्दियानिवासी २३ वर्षीया महिला नारायणी अस्पतालमा मृत्यु भएको छ। अस्पतालमा उपचारकै क्रममा आज बिहीबार बिहान साढे ६ बजे मृत्यु भएको नारायणी अस्पतालका प्रवक्ता डा. अतुलेश चौरसियाका बताए।
उनकाे अनुसार मृत्युु भएकी महिला गर्भवती थिइन्। केहि दिन ज्वरो र श्वासप्रश्वासको समस्या देखिएपछि उनकाे आफन्तले नारायणी अस्पतालमा भर्ना गरेका थिए। अस्पतालमा उपचारको क्रममै ती महिलाको स्वाब संकलन गरी परीक्षण गर्दा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो. कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकी ती महिला ३३ हप्ताकी गर्भवती रहेकी थिन्न ।
ती गर्भवती महिलामा उच्च रक्तचापसमेत रहेको अस्पतालले जनाएकाे छ । यसतै पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका–१४ बहुअरी निवासी ६२ वर्षीय पुरुषको बिहीबार बिहान ८ बजेर १० मिनेटमा नारायणी अस्थायी बिशेष काेराेना अस्पताल वीरगन्ज हेल्थ केयरमा मृत्यु भएको छ।
कोरोना मिर्गौलाका बिरामी रहेका उनको अस्पतालमै नियमित डायलसिससमेत भइरहेको थियो। गत साउन ३० मा उनी कोरोना अस्पतालमा भर्ना गरेर उपचार भइरहेकाे थियाे । यसैगरी बुधबार साँझ साढे ६ बजे पर्साको धोबनी गाउँपालिका–३ गुलरिया निवासी ७२ वर्षीय पुरुषकाे उपचारकाे क्रममा मृत्यु भएको छ.
नारायणी अस्पतालको आइशोलेसनमा उपचारकै क्रममा उनको बुधबार राति मृत्यु भएको थियो। ज्वरो आउनुका साथै श्वासप्रश्वासमा समेत समस्या देखिएपछि उनलाई भदौ ८ गते नारायणी अस्पतालमा ल्याएर भर्ना गरिएको थियो। त्यहि दिन उनको स्वाब संकलन गरी पीसीआर परीक्षण गर्दा उनमा कोरोना पोजिटिभ देखिएको थियो।